UChristina Anstead utyhila ukukhulelwa 'kwiChristina kuNxweme' kwiNkulumbuso yesi-2 - Malunga
UChristina Anstead utyhila ukukhulelwa 'kwiChristina kuNxweme' kwiNkulumbuso yesi-2
Ewe! UkuzonwabisaImifanekiso kaGetty
UChristina kuNxweme ibuyile nazo zonke iziqendu ezitsha rhoqo ngoLwesine ngokuhlwa ngentsimbi ye-9 kwi-HGTV. Ixesha lesibini likhatyiwe ngokuhlwanje ngekhitshi kunye nokulungiswa kwegumbi lokucima umlilo u-Travis, inkosikazi yakhe uJamie, kunye noonyana babo abathathu.
Kwi esi siqendu UChristina wayenikwe uxanduva lokuqinisekisa ukuba indawo ilandela isimbo 'sefama esefama' esinezixhobo 'ezicocekileyo nezimhlophe' ngokwesicelo sikaJamie, kodwa kananjalo wayenayo 'indlu yomlilo esebenzayo' kwisicelo sikaTravis. Ucacisile ukuba kwindlu yakhe yokucima umlilo, indawo yabelwe ngokufanelekileyo iqela lokupheka nokucoca. Yiyo loo nto wayefuna uyilo olufana nolwakhe ikhaya, apho yonke into inenjongo.
Ngelixa uChristina exoxa ngale projekthi intsha nomhlobo wakhe uCassie ngomhla wesidlo sasemini, wabelana ngeendaba zakhe ezimnandi- nangona ubunokugcina kunye nomntwana oneminyaka engama-36 kumajelo eendaba, usenokuba sele uyazi konke ngayo. . UChristina utyhile ukuba ukhulelwe umntwana wakhe wokuqala kunye nomyeni omtsha uAnt Anstead. (UChristina unabantwana ababini kumtshato wakhe wangaphambili kunye naye Flip okanye Flop iqabane uTarek El Moussa).
Ngelixa uChristina onwabile ngokukhulisa usapho, usenomceli mngeni ophambi kwakhe. Ngemvume yesi sibini, waguqula igumbi labo lokuhlala kunye nekhitshi laba yimodeli yomgangatho ovulekileyo oxhotyiswe nge-vinyl flooring, ezona zixhobo zomeleleyo. UChristina ukhethe ikhabethe elimhlophe eligungxayo, isiqithi esimibalabala, imiphezulu yeetafile emhlophe enokwahluka kwemabhile, kunye nezinto zechrome. Owona mceli mngeni mkhulu uvele xa ukhetha ukuba yeyiphi iithayile ekufuneka isetyenziselwe ikhitshi-kuya kufuneka ujonge ukubona ukuba yehle njani!
Ngombulelo, zonke iziphelo ezikhululekileyo zalungiswa kukutyhilwa kokugqibela, kwaye uJamie noTravis bonwabile yimveliso yokugqibela. Ulungiselelo lwabo lwangaphambili lwalunodonga olu-orenji kunye nohlaza, kunye neendidi ezimbini ezahlukeneyo zomgangatho. Ikhitshi kunye negumbi lokuhlala linikezela ngendawo eninzi, kodwa ngeenjongo ezincinci kakhulu. UChristina wakwazi ukwenza umlingo wakhe kwaye wavula indawo yosapho ngokususa udonga, ngokudala umbala ofanayo kunye nesitayile sombala, nokwandisa ukusebenza kwekhitshi.
Isiqendu siphela ngesinye sokugqibela esivela kuChristina: yinkwenkwe! Kuba ezi ziqendu zafotwa kwiinyanga ezininzi kwangaphambili, ungakhumbula ukuba uChristina sele ebeleke uLil 'Hudson London ngoSeptemba 2019. UChristina kuNxweme izakunika abalandeli ukujonga ukuba wakwenza njani ukukhulelwa kwakhe ngelixa wayesenza umlingo kumakhasimende akhe. Bukela apha ngezantsi ukhangele into onokuyilindela ngexesha lesibini.
Uyilo lomgangatho wethayile ekhitshini
I-jack o ilantern entle
itafile ezimbini zokutya
Uyilo lwerokethi lweegadi ezincinci